VoiceJungle: Ngwa ngwa, Oke ọnụ, Ọkachamara Voiceovers | Martech Zone
VoiceJungle: Ngwa ngwa, Oke ọnụ, Ọkachamara Voiceovers
N’izuụka a gara aga m nọrọ na nkekọ. Ekwesịrị m ịhapụ pọdkastị mana enweghị m intro na outro m. Emere m ike m ịdekọ ya n'onwe m, mana ịnwe m na intro na outro yana pọdkastị na-ada ụda ọkachamara. Nnyocha ngwa ngwa n'ịntanetị na achọtara m VoiceJungle, ma ekpebie m ịnwale ọrụ ahụ. Saịtị ahụ nwere ụda olu iji chọgharịa yana interface dị mfe ebe m nwere ike itinye iwu ahụ ozugbo.
Tụkwasị iwu dị mfe. Achọtara m olu (Amanda Elizabeth), uploaded m edemede maka intros na outros maka Gbanyụọ gburugburu, ma enwere m olu m n'ime otu awa. Ihe si na ya pụta bụ ihe ịtụnanya maka ọnụahịa ahụ.
Mgbe na-enyefe a voiceover edemede talent, ị nwekwara ike na-agụnye akwụkwọ faịlụ na gị iji. Kekọrịta egwu, vidiyo, ma ọ bụ akụkọ akụkọ nwere ike inyere aka na talent nweta mmetụta maka ọrụ ahụ dum ma nye gị naanị ụda olu dị mma. Ọ bụla VoiceJungle iji na-abịa otu FREE idegharị. Enwere ike ịrịọ mmegharị maka ihe ọ bụla, gụnyere ntụgharị edemede gbanwere ruo 10 sekọnd n'ogologo.
Ma tutu ikwenye ma budata olu ikpeazụ gị, ị nwekwara ike ịkekọrịta ihe ngosi ahụ na ndị ahịa ma ọ bụ ndị otu ndị ọzọ, ọbụlagodi na ha enweghị ohere na akaụntụ gị Na mgbakwunye na nke olu gị, VoiceJungle nwere ike inye:
Egwu dị n’azụ - I nwekwara ike ịchọta egwu iji mejupụta edemede gị ma gbakwunye ya na usoro gị. Ha ga-eme gị agwakọta.
Asụsụ Spanish - Younwere ike ịgbakwunye ntụgharị asụsụ Spanish maka naanị $ 40 na okwu 150. Mgbe emegharịrị edemede gị, ị ga-anata Spanish VO gị dechara na awa 24 ma ọ bụ obere!
NDMỌD:: M kwụrụ ụgwọ maka 30-abụọ nhọrọ na jụrụ m voiceover talent ka ịdekọ abụọ dị iche iche nsụgharị na a di na nwunye nke dị iche iche ekwekọghị. Tinyere edemede a, etinyere m egwu m họrọgoro iji nye onyinye na ụdị m ga-aga.
Tags: egwu dị n’azụIntroedemede ederedeọzọederede ederedentụgharịscriptasụsụ Spanisholuolujungleụda oluolu